Google Play na -ewepụta atụmatụ ọhụrụ maka igwe nchọta ya | Androidsis
A na -eme mgbanwe na Google Play nwa oge. Emere ha niile ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịnyagharịa ụlọ ahịa ngwa. Ugbu a bụ oge maka mgbanwe ọhụrụ, nke na -agakwa n'akụkụ a. N'ọnọdụ a, anyị na -eche mgbanwe na nhazi ihe nchọta, nke na -ahụzi anya ugbu a.
Site na imewe ọhụrụ a na Google Play, anyị nwere ike ịhụ na obere ngwa nke ngwa ndị ahụ ga -enweta nnukwu ọkwa. Na -eme ihe Nsonaazụ njedebe bụ ihe a na -ahụ anya nke ukwuu maka onye ọrụ. Yabụ na ọ kwesịrị ime ka ọ dị mfe ịnyagharị oge niile.
Tupu, mgbe anyị na -achọ ngwa na Google Play na ekwentị, anyị hụrụ ụfọdụ onyonyo nke ngwa ahụ na ụfọdụ ederede. Mana ha achọpụtala na ihe onyonyo na -ekwu karịa ederede. Ya mere, ha na -enweta ọkwa na mmelite a.
Yabụ, mgbe anyị na -achọ egwuregwu ma ọ bụ ngwa ugbu a, anyị ga -ahụ nsonaazụ dị ka nke ị nwere ike ịhụ na foto a. Ihe onyonyo ugbu a bụ ndị protagonists. Anyị nwere ike ịhụ thumbnails nke ihe bụ nhazi ma ọ bụ ọrụ nke ngwa a kapịrị ọnụ. N'ihi ya, anyị na -enweta echiche doro anya banyere ya.
Nke a kwesịrị inyere ndị ọrụ na -eme nchọgharị na Google Play aka ịchọta ihe masịrị ha ngwa ngwa. Na mgbakwunye, ha agaghị abanye na ngwa ọ bụla iji hụ ihe ọ na -enye ma ọ bụ ụdị ihe ọ nwere. Yabụ ọ na -arụkwa ọrụ nke ọma maka ndị ọrụ.
Mgbanwe ndị a na Google Play na igwe ọchụchọ ya bụ ndị ọrụ. Agbanyeghị na oge anyị enweghị ụbọchị a kapịrị maka mbupụta ya. Ha ekwesịghị iwe ogologo oge, yabụ na ọ nwere ike bụrụ n'oge ọkọchị a anyị ga -enwe ike iji ya. Agbanyeghị na anyị ga -eche maka nkwenye sitere na ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Play gbanwere atụmatụ nke search engine